Wakiilada Caalamka oo ku dadaalaya in ay Markale Kulmaan Hogaanka Soomaalida | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Wakiilada Caalamka oo ku dadaalaya in ay Markale Kulmaan Hogaanka Soomaalida
Wakiilada Caalamka oo ku dadaalaya in ay Markale Kulmaan Hogaanka Soomaalida
Wararka ayaa sheegaya inay bilowdeen dadaalo ay Xubnaha beesha Caalamka wadaan oo lagu doonayo in shirarka hogaamiyeyaasha Soomaalidu sii socdo ilaa laga gaarayo Xalka doorashada lagu Muransan yahay.
Waxaa Natiijo la’aan ku soo dhamaaday shirkii Xerada Afisyooni uga socday madaxda dowlada dhexe iyo kuwa Maamul goboleedyada,kaasoo Xukuumada Soomaaliya ay sheegtay in hogaamiyeyaasha Maamulada Puntland iyo jubaland ay shirkaas Fashiliyeen ayna diideen waxkasta oo Xal ah.
Balse war-saxaafadeed ay wada jir u soo saareen Maamulada Jubaland iyo Puntland ayay ku sheegeen inuusan jirin shir ay ka warqabaan oo Fashilmay islamarkaana ay ogyihiin kali ah inuu madaxweyne Farmajao dalbaday inuu wada-tashiyo soo sameeyo maalmo aan la cayimin,waxayna cadeeyeen inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka xalka loogu raadinayo Khilaafka doorashada Soomaaliya.
Wakiilada Caalamka ee Soomaaliya ku sugan ayaa ka shaqaynaya inay markale Miiska wada-hadalka isugu keenaan Hogaanka Soomaalida ee shirkii shalay ku kala tagay kadib Markii uu isfaham waa ka dhashay qaar ka mid ah qodobadii looga doodayay.
Xubnaha Beesha Caalamka ayaa shalay markii shirka lagu kala tagay waxay kulan gaar ah la yeesheen madaxweyneyaasha Maamulada Galmudug,Hirshabeelle iyo koonfur Galbeed,oo iyaguna Madaxweyneyaasha Maamulada Puntland iyo Jubaland ku eedeeyay Fashilkii Shirkii shalay ku yimid.
Madaxda sadexdaan Maamul ayaa la sheegay inay Xubnaha Beesha Caalamka ka dalbadeen in madaxda loo fasaxo deegaanadoodii hayeeshaa Wakiilada Beesha Caalamka ayaa arintaasi diidayn waxayna sheegeen in dhinicii Muqdisho ka baxa ayadoon wax Heshiis ah la gaarin Qaswade loo aqoonsan doono.
Xubanha beesha Caalamka ayaa la sheegayaa inay Kulankii Xalay Madaxda Maamulada Dowlada Taabacsan Culays ku saareen inaysan ka bixin muqdisho ilaa xalka doorashada la helo.
Galinka danbe ee Maanta ayaa sidoo kale Waxaa la filayaa in Xubnaha Beesha Caalamku ay la kulmaan Madaxda Maamulada Jubaladn iyo Puntland,waxayna ka wada-hadlayaan sidii ay u suurogali lahaayeen sii socoshada shiraraka doorashada ayadoo si deg deg ah looga heshiinayo qodobadii kalataga sababay.
Ugu danbayntii Xubnaha Beesha Caalamka ayaa Madaxda Soomaalida waxay ugu baaqeen inay markale Kulan yeeshaan si ay uga wada hadlaan khilaafka doorashada wadankuna doorasho u aado.
Next articleCaruur Walaalo ah oo Maydadkooda laga Helay Duleedka Bay dhabo